Ukukhoseliswa kwabaseHong Kong yiBritain kunyusa ubutha bayo neChina - Bayede News
Phakama Mbokodo: Uphakamise abesifazane osengusomkhathi
Isishoshovu sentando yeningi eHong Kong uNathan Law (osesithombeni), sithe sikhoseliswe ngokwezepolitiki eBritain lapho safika khona ngoNtulikazi ngonyaka odlule ngemuva kokuthi uHulumeni waseChina ufake umthetho oqinile.
Lesi sinyathelo sizokwandisa ukungqubuzana nokungazwani phakathi kweLondon neBeijing njengoba iBritain ivula iminyango yayo ezakhamuzini ezingaba ngaphezu kwezigidi ezinhlanu zaseHong Kong ngemuva komthetho wezokuphepha osenombango kuleliya lizwe.
“Ngemuva kokuhlolwa kaningana ezinyangeni ezine ezedlule, uMnyango Wezasekhaya ungasizile ukuthi isicelo sami sokukhoseliswa samukelwe,” kusho uLaw enkundleni yokuxhumana uTwitter.
“Indaba yokuthi ngifunwa kangaka ngaphansi komthetho wezokuphepha kukhombisa khona ukuthi ngichayeka ekushushisweni kanzima kwezepolitiki futhi mancane amathuba okuthi ngibuyele eHong Kong ngaphandle kokuzifaka engozini.”
Ukuqinisa isinyathelo sayo sokuheha izakhamuzi zaseBeijing iBritain ngeledlule ithembise opondo abayizigidi ezingama-R43 ($59 million) ukusiza izakhamuzi zithole imisebenzi, izindlu kanye nezikole ngaphansi kohlelo oluvumela izigidi ukuba zihlale kabusha kuleli lizwe.
IBritain isole iChina ngokwephula imithetho eminingi ngaphansi kwesivumelwano esenza leli dolobha elizimele libuyiselwe ngaphansi kweChina ngowe-1997. Ithi umthetho wezokuphepha waseChina uzomisa iZishayamthetho zakuleli dolobha eziseka umbuso wentando yeningi futhi ululaza ngezinga eliphezulu ukuzimela kwaleli dolobha.
IHong Kong kanye neziphathimandla zaseBeijing babethi lo mthetho ubalulekile ukuvala izimbobo ekuvikeleni kwezwe ezavela kakhulu ngezinyanga zombhikisho eyayinodlame ngowezi-2019. IChina sekukaningana itshela “osomandla” basentshonalanga ukuthi bayeke ukungena izindaba zaseHong Kong.
AbaseHong Kong babe ngabatshalizimali besihlanu ngobukhulu abasanda kungena enkabeni yeLondon kusukela ngasekupheleni kukaNcwaba futhi bebelokhu benyusa amanani kwezinye izifunda ezithandwayo ngaphandle kwenhlokodolobha yaseBritain.
ILondon ilinganisela ukuthi izinkulungwane ezingamakhulu amathathu zezakhamuzi zaseHong Kong zingathutha zize khona kule minyaka emihlanu ezayo kanti iBank of America ilindele ukuthi izakhamuzi zaseHong Kong ezifudukele eBritain zingadala ukuphuma kwemali eyizigidi eziyizinkulungwane ezingama-36 zamadola aseMelika ngonyaka wezi-2021.
Anathi Mtaka Apr 16, 2021